June 2019 – Dhammadīpa
Posted on 29 Jun 2019 by Ashin Sopāka
“Householders and homeless alike,
Eachasupport for the other,
Both accomplish the true Dhamma—
The unsurpassed security from bondage.
“From householders the homeless receive
These basic necaessities of life,
Robes to wear andaplace to dwell
Dispelling the hardships of the seasons.
“And by relying on one of good conduct,
Home-loving layfolk dwelling inahouse
Place faith in those worthy ones
Of noble wisdom and meditative.
“Practising the Dhamma in this life,
The path leading toagood bourn,
Those wishing for pleasure rejoice
In the delights of the deva world.” – Iti 107 (111)
“Sāgārā anagārā ca,
Sāgāresu ca cīvaraṁ,
Sugataṁ pana nissāya,
Idha dhammaṁ caritvāna,
”အိမ်ရာထောင်သူ အိမ်ရာမထောင်သူ လူနှင့်ရဟန်းနှစ်ဦးတို့သည် အချင်းအချင်းမှီကြကုန်၍ ယောဂလေးဖြာကုန်ရာဖြစ်သော အတုမရှိ မြတ်သောသူတော်ကောင်း တရားကို ပြီးစေနိုင်ကြကုန်၏။
အိမ်ရာထောင်သူ လူတို့ထံမှ အိမ်ရာမထောင်သူ ရဟန်းတို့သည် ဥတုဘေးရန်ကို ပယ်ဖျောက်တတ်သော သင်္ကန်းကိုလည်းကောင်း၊ ကျောင်းအိပ်ရာနေရာကိုလည်း၊ ကောင်း၊ ဆွမ်းနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိုလည်းကောင်းခံယူကြကုန်၏။
အိမ်၌ နေလျက် စည်းစိမ်ဥစ္စာစသည်ကို ရှာမှီးကုန်သော လူတို့သည် အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်ကို အမှီပြု၍ဖြူစင်သော ပညာဖြင့် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ကြည်ညိုကြကုန်၍ သမထဝိပဿနာဖြင့် ရှုကြကုန်လျက်ဤဘဝ၌ သုဂတိရောက်ကြောင်း ဖြစ်သော လမ်းစဉ်တရားကို ကျင့်ကြကုန်ပြီးလျှင် နတ်ပြည်သို့ ရောက်ကာ နှစ်သက်ကြကုန်လျက် အလိုရှိရာ ကာမဝတ္ထုတို့နှင့် ပြည့်စုံကြ၍ ဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
“Có nhà và không nhà,
Như điều họ mong muốn.”
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, monk, saṅgha, thingyan, သင်္ကြန်
Posted on 22 Jun 2019 by Ashin Sopāka
“Gain and loss, disrepute and fame,
“A wise and mindful person knows them
and sees that they are subject to change.
Desirable conditions don’t excite his mind
nor is he repelled by undesirable conditions.
“He has dispelled attraction and repulsion;
they are gone and no longer present.
Having known the dustless, sorrowless state,
he understands rightly and has transcended existence.” – AN 8.6
Nindā pasaṁsā ca sukhaṁ dukhañca;
Iṭṭhassa dhammā na mathenti cittaṁ,
Vidhūpitā atthangatā na santi;
Padañca ñatvā virajaṁ asokaṁ,
လာဘ်ရမှုသည်လည်းကောင်း၊ လာဘ်မရမှုသည်လည်းကောင်း၊ အခြံအရံရှိမှုသည် လည်းကောင်း၊ အခြံအရံမရှိမှုသည်လည်းကောင်း၊ ကဲ့ရဲ့မှုသည်လည်းကောင်း၊ ချီးမွမ်းမှုသည်လည်းကောင်း၊ ချမ်းသာမှုသည်လည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲမှုသည်လည်းကောင်း ဤသဘောတရားတို့သည် လူတို့၌ အမြဲမရှိကုန်၊ အတည်မရှိကုန်၊ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲတတ်သော သဘောရှိကုန်၏။ သတိနှင့် ပြည့်စုံသော ပညာရှိသည် ထိုတရားတို့ကို သိ၍ ဖောက်ပြန်တတ်သော တရားတို့ကို (ဉာဏ်ဖြင့်) ရှုဆင်ခြင်၏၊ ထိုသို့သော ပညာရှိ၏ စိတ်ကို အလိုရှိအပ်သော လောကဓံတရားတို့သည်လည်း မချောက်ချားနိုင်ကုန်၊ အလိုမရှိအပ်သော လောကဓံတရားတို့ကြောင့်လည်း စိတ်ထိခိုက်ပင်ပန်းခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ပေ။ ထိုသူအား စိတ်နှင့် လျော်သော လောကဓံတရားတို့သည်လည်းကောင်း၊ စိတ်နှင့် ဆန့်ကျင်သော လောကဓံတရားတို့သည်လည်းကောင်း ပျက်စီးပြီး ချုပ်ပျောက်ပြီး ဖြစ်၍ မရှိကုန်၊ ဘဝ၏ တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ရောက်သောသူသည် ကိလေသာ မြူကင်း၍ စိုးရိမ်မှုမရှိသော နိဗ္ဗာန်ကို သိလျက် ဘဝ၏ တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ရောက်သည်၏ အဖြစ်ကို ကောင်းစွာ သိနိုင်ပေ၏။
“Lợi dưỡng, không lợi dưỡng,
Ði đến bờ bên kia.”
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, lokadhamma, mindfulness, sati, worldly conditions
Posted on 15 Jun 2019 by Ashin Sopāka
“Here, venerable sir, wanderers of other sects ask us: ‘For what purpose, friends, is the holy life lived under the ascetic Gotama?’ When we are asked thus, venerable sir, we answer those wanderers thus: ‘It is, friends, for the full understanding of suffering that the holy life is lived under the Blessed One.’ We hope, venerable sir, that when we answer thus we state what has been said by the Blessed One and do not misrepresent him with what is contrary to fact; that we explain in accordance with the Dhamma, and that no reasonable consequence of our assertion gives ground for criticism.”
“If, bhikkhus, wanderers of other sects ask you: ‘But, friends, is thereapath, is thereaway for the full understanding of this suffering? ’—being asked thus, you should answer them thus: ‘There isapath, friends, there isaway for the full understanding of this suffering.’
“And what, bhikkhus, is that path, what is that way for the full understanding of this suffering? It is this Noble Eightfold Path; that is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This is the path, this is the way for the full understanding of this suffering.
“Being asked thus, bhikkhus, you should answer those wanderers of other sects in suchaway.” – SN 45.5
“Idha no, bhante, aññatitthiyā paribbājakā amhe evaṁ pucchanti: ‘kimatthiyaṁ, āvuso, samaṇe gotame brahmacariyaṁ vussatī’ti? Evaṁ puṭṭhā mayaṁ, bhante, tesaṁ aññatitthiyānaṁ paribbājakānaṁ evaṁ byākaroma: ‘dukkhassa kho, āvuso, pariññatthaṁ bhagavati brahmacariyaṁ vussatī’ti. Kacci mayaṁ, bhante, evaṁ puṭṭhā evaṁ byākaramānā vuttavādino ceva bhagavato homa, na ca bhagavantaṁ abhūtena abbhācikkhāma, dhammassa cānudhammaṁ byākaroma, na ca koci sahadhammiko vādānuvādo gārayhaṁ ṭhānaṁ āgacchatī”ti?
“Taggha tumhe, bhikkhave, evaṁ puṭṭhā evaṁ byākaramānā vuttavādino ceva me hotha, na ca maṁ abhūtena abbhācikkhatha, dhammassa cānudhammaṁ byākarotha, na ca koci sahadhammiko vādānuvādo gārayhaṁ ṭhānaṁ āgacchati. Dukkhassa hi pariññatthaṁ mayi brahmacariyaṁ vussati. Sace vo, bhikkhave, aññatitthiyā paribbājakā evaṁ puccheyyuṁ: ‘atthi panāvuso, maggo, atthi paṭipadā etassa dukkhassa pariññāyā’ti, evaṁ puṭṭhā tumhe, bhikkhave, tesaṁ aññatitthiyānaṁ paribbājakānaṁ evaṁ byākareyyātha: ‘atthi kho, āvuso, maggo, atthi paṭipadā etassa dukkhassa pariññāyā’ti.
“Katamo ca, bhikkhave, maggo, katamā paṭipadā etassa dukkhassa pariññāyāti? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṁ—sammādiṭṭhi, sammāsankappo, sammāvācā, sammākammanto, sammāājīvo, sammāvāyāmo, sammāsati, sammāsamādhi. Ayaṁ, bhikkhave, maggo, ayaṁ paṭipadā etassa dukkhassa pariññāyāti. Evaṁ puṭṭhā tumhe, bhikkhave, tesaṁ aññatitthiyānaṁ paribbājakānaṁ evaṁ byākareyyāthā”ti.
အသျှင်ဘုရား အယူတစ်ပါးရှိကုန်သော ပရိဗိုဇ်တို့သည် အကျွန်ုပ်တို့အား “ငါ့သျှင်တို့ အဘယ်အကျိုးကို လို၍ ရဟန်းဂေါတမ၏ အထံ၌ မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံးဘိသနည်း”ဟု မေးကုန်၏၊ အသျှင်ဘုရား ဤသို့ အမေးခံရသောအကျွန်ုပ်တို့သည် အယူတစ်ပါးရှိကုန်သော ပရိဗိုဇ်တို့အား “ငါ့သျှင်တို့ ဆင်းရဲကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းငှါ မြတ်စွာဘုရား၏ အထံ၌ မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံး၏”ဟုဤသို့ ဖြေကြားပါကုန်၏။ အသျှင်ဘုရား အသို့ပါနည်း၊ ဤသို့ အမေးခံရ၍ ဤသို့ ဖြေခဲ့ကုန်သောအကျွန်ုပ်တို့ သည် မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူတိုင်း ဖြေကြားကြသူများဟုတ်ပါကုန်၏လော၊ မြတ်စွာဘုရားကို မဟုတ်မမှန်သော စကားဖြင့် စွပ်စွဲရာ မရောက်ဘဲ ရှိပါကုန်၏လော၊ တရားတော်အားလျော်သည်ကို ဖြေဆိုခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ပါကုန်၏လော၊ အကျွန်ုပ်တို့၏ ဝါဒ,အနုဝါဒသည်အကြောင်းနှင့် တကွဖြစ်၍ အကဲ့ရဲ့ ခံရခြင်းသို့ အနည်းငယ်မျှ မရောက်ဘဲ ရှိပါ၏လောဟုလျှောက်ကြကုန်၏။
ရဟန်းတို့ ဤသို့ အမေးခံရ၍ ဤသို့ ဖြေဆိုခဲ့ကုန်သော သင်တို့သည် စင်စစ် ငါဘုရား ဟောကြားတော်မူတိုင်း ဖြေဆိုသူများ ဖြစ်ကုန်၏၊ ငါဘုရားကိုလည်း မဟုတ်မမှန်သော စကားဖြင့် စွပ်စွဲရာမရောက်ကုန်၊ တရားတော်အား လျော်သည်ကိုသာ ဖြေဆိုသူများ ဖြစ်ကြကုန်၏၊ သင်တို့၏ ဝါဒ, အနုဝါဒသည် အကြောင်းနှင့် တကွဖြစ်၍ အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းသို့ အနည်းငယ်မျှ မရောက်ပေ။ မှန်၏၊ ဒုက္ခကိုပိုင်းခြား ၍ သိခြင်းငှါ ငါ့ထံ၌ မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံး၏။ ရဟန်းတို့ အကယ်၍အယူတစ်ပါးရှိကုန်သော ပရိဗိုဇ်တို့သည် “ငါ့သျှင်တို့ ဤဆင်းရဲ ‘ဒုက္ခ’ ကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းငှါလမ်းစဉ်ရှိပါသလော၊ အကျင့်ရှိပါ သလော”ဟု သင်တို့ကို ဤကဲ့သို့ မေးမြန်းကုန်ငြားအံ့၊ ရဟန်းတို့ဤသို့ အမေးခံရသော သင်တို့သည် အယူတစ်ပါးရှိကုန်သော ပရိဗိုဇ်တို့အား “ငါ့သျှင်တို့ဤဆင်းရဲ ‘ဒုက္ခ’ကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းငှါ လမ်းစဉ် သည် ရှိ၏၊ အကျင့်သည် ရှိ၏”ဟု ဤသို့ဖြေဆိုကြကုန်လော့။
ရဟန်းတို့ ဤဆင်းရဲ ‘ဒုက္ခ’ကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းငှါ လမ်းစဉ်သည် အဘယ်နည်း၊ အကျင့်သည်အဘယ်နည်း၊ အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော ဤအရိယမဂ်ပင်တည်း။ ဤသည်တို့ကား အဘယ်တို့နည်း၊ မှန်ကန်သောအမြင် ‘သမ္မာဒိဋ္ဌိ’‘သမ္မာသင်္ကပ္ပ’၊ မှန်ကန်သော စကား ‘သမ္မာဝါစာ’၊ မှန်ကန်သောအလုပ် ‘သမ္မာကမ္မ န္တ’၊ မှန်ကန်သောအသက်မွေးမှု ‘သမ္မာအာဇီဝ’၊ မှန်ကန်သောအားထုတ်မှု ‘သမ္မာဝါယာမ’၊ မှန်ကန်သော အောက်မေ့မှု ‘သမ္မာသတိ’၊ မှန်ကန်သော တည်ကြည်မှု ၊ ‘သမ္မာသမာဓိ’တို့တည်း။ ရဟန်းတို့ ဤသည်ကားဤဆင်းရဲ ‘ဒုက္ခ’ကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းငှါ လမ်းစဉ်တည်း၊ အကျင့်တည်း။ ရဟန်းတို့ ဤသို့ အမေးခံရသော သင်တို့သည် အယူတစ်ပါးရှိကုန်သော ပရိဗိုဇ်တို့အား ဤအတိုင်း ဖြေဆိုကြကုန်လော့ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
“Ở đây, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo đến hỏi chúng con: “Này chư Hiền, vì mục đích gì, Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama?” Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: “Này chư Hiền, với mục đích liễu tri đau khổ, Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama”. Ðược hỏi như vậy và trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, có phải chúng con trả lời đúng với lời nói Thế Tôn, chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, chúng con trả lời đúng pháp và thuận pháp, và những ai là vị đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích?
“Này các Tỷ-kheo, các Ông được hỏi như vậy và trả lời như vậy là các Ông trả lời đúng với lời của Ta, các Ông không xuyên tạc Ta với điều không thật, các Ông trả lời đúng pháp và thuận pháp, và những ai là vị đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích. Này các Tỷ-kheo, do mục đích liễu tri đau khổ mà Phạm hạnh được sống dưới Ta. Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các Ông: “Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri đau khổ này?” Ðược hỏi vậy, thời các Ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: “Này chư Hiền, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri đau khổ này”.
“Này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến liễu tri đau khổ? Ðây là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chính tri kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, chính định. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến liễu tri sự đau khổ này.
“Ðược hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy.”
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, noble eightfold path
Sammā Vāyāma – Right Effort
Posted on 1 Jun 2019 by Ashin Sopāka
“Bhikkhus, for direct knowledge of lust, four things are to be developed. What four? Here,abhikkhu generates desire for the non-arising of unarisen bad unwholesome states; he makes an effort, arouses energy, applies his mind, and strives. He generates desire for the abandoning of arisen bad unwholesome states; he makes an effort, arouses energy, applies his mind, and strives. He generates desire for the arising of unarisen wholesome states; he makes an effort, arouses energy, applies his mind, and strives. He generates desire for the maintenance of arisen wholesome states, for their non-decline, increase, expansion, and fulfillment by development; he makes an effort, arouses energy, applies his mind, and strives. For direct knowledge of lust, these four things are to be developed.” – AN 4.275
“Rāgassa, bhikkhave, abhiññāya cattāro dhammā bhāvetabbā. Katame cattāro? Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati; uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati; anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati; uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati. Rāgassa, bhikkhave, abhiññāya ime cattāro dhammā bhāvetabbā”ti.
ရဟန်းတို့ ရာဂကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိရန်တရားလေးမျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။ အဘယ်လေးမျိုးတို့နည်းဟူမူ— ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် မဖြစ်ပေါ်သေးသော အကုသိုလ်တရားယုတ်တို့ကို မဖြစ်ပေါ်စေရန် ပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’ကို ဖြစ်စေ၏၊ ကြိုးစား၏၊ လုံ့လထုတ်၏၊ စိတ်ကို တင်းထား၏၊ ဆောက်တည်ထား၏။ ဖြစ်ကုန်ပြီးသော အကုသိုလ်တရားယုတ်တို့ကို ပယ်ရန်။ပ။ မဖြစ်ပေါ်သေးသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်။ပ။ ဖြစ်ကုန်ပြီးသော ကုသိုလ်တရားတို့ တည်တံ့စေရန် မပျောက်ပျက်စေရန် လွန်စွာ ဖြစ်စေရန် ပြန့်ပြောစေရန် ပွါးများရန် ပြည့်စုံစေရန် ပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’ ကို ဖြစ်စေ၏၊ ကြိုးစား၏၊ လုံ့လထုတ်၏၊ စိတ်ကို တင်းထား၏၊ ဆောက်တည်ထား၏။ ရဟန်းတို့ ရာဂကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိရန် ဤတရားလေးမျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
“Ðể thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, trì tâm không cho sanh khởi; đối với các pháp ác bất thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, trì tâm khiến chúng đoạn tận; đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, trì tâm khiến cho sanh khởi; đối với các pháp thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, trì tâm khiến chúng được duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bốn pháp này cần phải tu tập.”
「比丘們！為了貪的證智，四法應該被修習，哪四個呢？比丘們！這裡，比丘為了未生起的惡不善法之不生起而生欲，努力、生起活力，發心、勤奮；為了已生起的惡不善法之捨斷, 努力、生起活力，發心、勤奮；為了未生起的善法之生起, 努力、生起活力，發心、勤奮；為了已生起的善法之存續、不消失、增加、擴大、圓滿修習而生欲，努力、生起活力，發心、勤奮，比丘們！為了貪的證智，這四法應該被修習。」
Image: Chùa Long Hưng front gate
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, right effort